“Dagaal diyaar u noqo marka aan imaado Old Trafford” | Wardoon Wardoon.net - Somali News
“Dagaal diyaar u noqo marka aan imaado Old Trafford”
Tababaraha kooxda Chelsea Antonio Conte ayaa sarre usii qaaday dagaalka afka ah ee kala dhexeeya dhiggiisa Manchester United Jose Mourinho Sabtidii, wuxuuna Mourinho ku tilmaamay inuu nin yar uu ka yahay wixii lasoo maray, nin yar uu ka yahay waxa haatan soconaya isla markaana nin yar uu ka ahaan doono waxa mustaqbalka dhacaya.
Conte ayaa sidoo kale weerar afka ah ku qaaday Mourinho isagoo soo jeediyey inuu qabo cudurka Senile Dementia kaasoo dadka xasuusta iyo koontaroolka ka lumiya.
Mourinho ayaa isla habeenkaas dib isaga weeraray Conte isagoo farta ku fiiqay ganaaxiisii afarta bilood ahaa ee laga saaray kubadda cagta xilli ciyaareedkii 2012 illaa 2013 markaasoo lagu eedeeyey inuu ku lug yeeshay ciyaaro natiijadooda la qorsheeyey.
Si kastaba ha ahaatee, Conte ayaa wa dembi ah lagu waayey sannadkii 2016kii, iyadoo baaritaan dheer lagu sameeyey kiiskiisa, ka dib kulankii ay Chelsea barbardhaca 0-0 ah la gashay kooxda Norwich City ee tartanka FA Cup, Conte wuxuu doortay inuu markale xuso sida uu u dhaqan xun yahay Mourinho.
Caddeymaha uu miiska soo saaray Conte waxaa ka mid ah in Mourinho aysan dhab ka aheyn ixtiraamkii uu u muujiyey Claudio Ranieri markii laga raacdeeyey kooxda Leicester City: “Xaqiiqadu waxay tahay aniga waxaa la i ganaaxay afar bilood, balse Maxkamad ayaa wax dembi ah igu weysay.
“Waxaan u maleynayaa inay aheyd inuu ka fiirsado Mourinho inta uusan hadalkaan oo kale ku dhihin shaqsi aniga oo kale ah, waxay aheyd inuu si dhab ah uga fikiro. Taasi waxay muujineysaa inuu yahay nin aad u yar. Mourinho xitaa si wacan ulama socdo xaaladda waqtigaan la taagan yahay.
“Laakiin si wanaagsan ayaan u garanayaa ninkaan marka laga hadlayo taariikhdii hore, wuxuuna ka ahaa nin yar iyadoo loo eegayo meertooyin badan, waqti xaadirkaan nin yar ayuu ka yahay meertada aan ku jirno, waana hubaa inuu mustaqbalka nin yar uun kasii ahaan doono.
“Mourinho waa nuucaan. Si wanaagsan ayaad u garaneysaan warbaahintiinnu. Ma ahan qof ixtiraam badan. Laakiin taasi aniga dhib iguma heyso. Wuxuu aniga iila muuqdaa nin yar oo keliya leh taariikh yar”.
Conte ayaa xitaa daaha ka qaaday in Mourinho aysan dhab ka aheyn qaabkii uu ula dhaqmay Claudio Ranieri oo ah tababare Italy u dhashay kaasoo ay saaxiib dhow yihiin.
Mourinho ayaa la xasuustaa inuu dhowr jeer horay weerar ugu qaaday tababare Ranieri uguna jeesjeesay, balse magaciisa oo loo soo gaabiyo CR ayuu ku qoray cinwaanka ugu horreeya ee buugga uu ku bixinayo cashirrada tababarka Man Utd markii ay Leicester raacdeysay macalinkaan.
Conte wuxuu yiri: “Waxaan xasuustaa sidii uu Mourinho uga dhigay Ranieri tababare tusaale xun u ah jiil kasta, xitaa wuxuu ku tilmaamay Ranieri mid aan Ingiriiska ku hadli aqoon. Ka dibna maxaa dhacay? Ranieri waa la raacdeeyey, isaguna wuxuu u muujiyey ixtiraam been abuur ah.
“Anigu mid ayaan garanayaa, haddii aad shaqsiga la dagaaleyso, waa inaad isku daydo inaad disho shaqsigaas. Mourinho laba sanno gudahood ayuu marna isku deyey inuu dilo Ranieri marna isku deyey inuu caawiyo, maxaa yeelay wuxuu u dareemay inay tasi u wanaagsan tahay taariikhdiisa”.
Haatan Xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ee magacooda loo soo gaabiyo FA-ga ayaa laga yaabaa inay soo kala dhexgalaan Mourinho iyo Conte oo iska hor imaan doona 25ka bisha soo aadan ee Febraayo.
Conte oo arrintaas ka hadlayana wuxuu yiri: “Ma jiraan wax aan haatan kala caddeyn doono. Fursad ayaan u heli doonaa isaga marka aan wajahno Man United ciyaarta ka dhaceysa Old Trafford. Aniga iyo Mourinho si waji ka waji ah ayaan u kulmi doonaa. Anigu dagaal diyaar ayaan u ahay, balse ma ogi haddii uu isagu diyaar yahay”.